Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Canada hampihena 90% ny fahafaha-manao noho ny fiatraikany Covid-19
Nilaza ny Air Canada fa noho ny fiantraikan'ny Covid-19 mbola tsy nisy toa azy teo amin'ny orinasany, hampihena ny fahafaha-manao ny telovolana faharoa ny taona 2020% -85% raha oharina amin'ny Q90 tamin'ny taon-dasa ary hametraka mpikambana 2 ao amin'ny mpiasa iraisan'ny ON. Adiresy adiresy sy volom-borona 15,200 1,300 eo ho eo ny mpitantana. Ny fihenan'ny toeram-piasana dia hanomboka amin'ny 3 aprily na ho amin'ny XNUMX aprily ary kasaina mihelina.
"Ny habe sy ny faharetan'ny Covidien-19 ny areti-mandringana dia mitaky valiny lehibe amin'ny ankapobeny. Ny famoahana ny ampahany betsaka amin'ny mpiasanay dia fanapahan-kevitra mampanaintaina fa iray kosa takiana amintsika handray ny fijanonantsika kely kokoa mandritra ny fotoana manaraka. Hanampy azy io hiantoka izany Air Madagascar dia afaka mitantana amin'ny alàlan'ity krizy ity izay misy fiatraikany amin'ny seranam-piaramanidina na aiza na aiza. Mino izahay fa ny fotoana fohy ananan'ireo fihenam-bidy ireo, maro no tratra tamin'ny alàlan'ny programa an-tsitrapo, miaraka amin'ny fepetra fanalefahana hafa, dia hametraka antsika hamerina ny asa mahazatra raha vantany vao mihatsara ny toe-draharaha, ”hoy i Calin Rovinescu, filoha ary Lehiben'ny mpanatanteraka.
“Azoko sy anenenako ny vokatr'izany eo amin'ny mpiasa sy ny fianakavian'izy ireo. Misaotra ny mpiasa rehetra ato amiko, sy ny mpitarika ny sendika, izahay niara-niasa taminay tamim-pahombiazana tamin'ny fampiharana ireo fepetra ireo ”.
Ho fanampin'ny fihenan'ny mpiasa tsy maharitra, ny fepetra hafa ampiharina amin'ny Air Canada dia misy:
Fandefasana vidim-piainana manerantany sy fanodikodinam-bola manerana ny orinasa, 500 tapitrisa dolara farafahakeliny.
Manonitra ny tsipika fampindramam-bola misy $ 1 miliara eo ho eo, mba hanomezana tombony fanampiny.
Andriamatoa Rovinescu, filohan'ny Air Canada & Lehiben'ny mpanatanteraka, ary Michael Rousseau, lefitry ny mpanatanteraka lefitra ao Air Canada ary lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola, dia nanaiky ny hanafoanana ny 100% amin'ny karamany. Ny Executive Senior dia handao eo anelanelan'ny 25% - 50% amin'ny karamany raha ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana ny Air Canada dia nanaiky ny fihenan'ny 25%. Ny mpitantana Air Canada hafa rehetra dia hampihena ny karamany 10% mandritra ny telovolana faharoa.
Ny Air Canada dia nampiato ny programa fanavotana ny anjarany nanomboka ny 2 martsa 2020.
Tamin'ny fiandohan'ity andro ity dia nanambara ny praiminisitra kanadianina fa misy programa fanampiana ny karama vaovao izay hilazana amin'ny antsipiriany amin'ny herinandro ary ny Air Canada dia handinika ny fiantraikan'izany amin'ny drafitra fanalefahana azy. Ankoatr'izay, nanaiky ampahibemaso ihany koa ny praiminisitra fa ny krizy atrehin'ireo indostria toy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mila fanampiana fanampiny ankoatry ny fanampiana ny karama sy ny fepetra fampindramam-bola efa nambaran'ny governemanta federaly.
Miankina amin'ny fameperana ataon'ny governemanta, raha mbola mitohy ny krizy, ny Air Canada dia mikasa ny hanohy hanompo kely amin'ny toerana misy ny sisintany iraisampirenena sy Etazonia avy amin'ny tanàna kanadianina voafantina aorian'ny 1 aprily 2020 ho fanampin'ny tambajotra mihena any Canada. Ho fanampin'izay, ny Air Canada dia hanohy hiasa sidina iraisam-pirenena manokana miaraka amin'ny Governemanta Canada hampody ireo Kanadiana any ivelany ary koa sidina ho an'ny entana ihany mba hiantohana ny fitohizan'ny fivezivezena amin'ny entana ilaina, anisan'izany ny fitaovam-pitsaboana.